KEDU IHE NKESA EMAIL? - OZI - 2019
Usoro Excel na enyemaka nke ngwá ọrụ dị ka usoro na-enye gị ohere ịrụ ọrụ dị iche iche n'etiti data na sel. Omume dị otú a gụnyere ntinye. Ka anyị lebakwuo anya na ụzọ ndị ị nwere ike isi mee atụmatụ a na Excel.
Ntinye ntinye nke Excel nwere ike itinye aka na nọmba a kapịrị ọnụ yana adreesị nke mkpụrụ ndụ nke data dị. A na-arụ ọrụ a site na ntinye pụrụ iche. Dị ka ọ dị na nchịkọta ndị ọzọ na usoro a, tupu ntinye nchịkọta ị chọrọ iji dozie ihe ịrịba ama ahụ (=). Mgbe ahụ, a na-edezi akara ngosi mwepụ (n'ụdị nọmba ma ọ bụ adreesị cell). (-), nke mbụ deductible (n'ụdị ọnụ ọgụgụ ma ọ bụ adreesị), na n'ọnọdụ ụfọdụ, ụbụrụ na-esote.
Ka anyị leba anya na ihe atụ ụfọdụ nke otu esi arụ ọrụ a na Excel.
Nzọụkwụ 1: Wepụ Ọnụ Ọgụgụ
Ihe kachasị mfe bụ nrughari nke nọmba. Na nke a, a na-eme omume niile n'etiti nọmba kpọmkwem, dịka na onye na-arụkọ ihe mgbe niile, ọ bụghị n'etiti sel.
Họrọ cell ọ bụla ma ọ bụ debe cursor na ntụziaka usoro. Anyị na-etinye ihe ịrịba ama hà. Anyị na-ebipụta nchịkọta ihe na nrughari, dịka anyị na-eme na akwụkwọ. Dịka ọmụmaatụ, dee usoro a:
Iji mee usoro nhazi, pịa bọtịnụ ahụ. Tinye na keyboard.
Mgbe emechara omume ndị a, a na-egosipụta nsonaazụ na cell ahụ ahọrọ. N'ọnọdụ anyị, ọnụ ọgụgụ a bụ 781. Ọ bụrụ na ị jiri data ndị ọzọ maka nchịkọta, mgbe ahụ, ya mere, ihe ga-esi na ya pụta ga-adị iche.
Nzọụkwụ 2: Wepụ Ọnụ Ọgụgụ si Sel
Ma, dịka ị maara, Excel bụ, karịa ihe niile, usoro ihe omume maka ịrụ ọrụ na tebụl. Ya mere, arụmọrụ cell dị ezigbo mkpa na ya. Karịsịa, ha nwere ike iji maka nrughari.
Họrọ cell nke ntinye usoro ntinye. Anyị na-etinye ihe ịrịba ama "=". Pịa na cell nke nwere data. Dika ị nwere ike ịhụ, mgbe ihe a gasịrị, adreesị ya abanyela n'ụlọnga usoro ahụ ma gbakwunye ya mgbe ihe ịrịba ama ahụ gasịrị hà. Anyị na-ebipụta ọnụọgụgụ ahụ nke kwesiri ka a wepụ ya.
Dị ka ọ dị na ikpe gara aga, iji nweta nsonaazụ, pịa igodo Tinye.
Nzọụkwụ 3: Wepụ Cell sitere na Cell
Ị nwere ike ịrụ ọrụ nrube ntanye na n'ozuzu na-enweghị nọmba, na-eche naanị adreesị nke mkpụrụ ndụ ahụ na data. Usoro ahụ bụ otu.
Họrọ cell iji gosipụta ihe nchoputa ma tinye ya na ya hà. Anyị pịa na cell nke nwere decremented. Anyị na-etinye ihe ịrịba ama "-". Pịa na cell nke nwere deductible. Ọ bụrụ na a ga-arụ ọrụ ahụ na ọtụtụ ndị na-adabaghị, anyị ga-etinye ihe ịrịba ama "obere" ma na-akpa àgwà na otu ihe ahụ.
Mgbe edebachara data ahụ, iji gosi nsonaazụ ahụ, pịa bọtịnụ ahụ Tinye.
Nzọụkwụ 4: Nhazi usoro nke ntinye nrugharị
Ọtụtụ mgbe, mgbe ị na - arụ ọrụ na Excel, ọ na - eme na ịkwesịrị ịgbakọ ntinye ntinye nke otu mkpụrụ ndụ nke mkpụrụ ndụ gaa na kọlụm ọzọ nke mkpụrụ ndụ. N'ezie, ị nwere ike ide akwụkwọ dị iche maka ime ihe ọbụla aka, mana nke a ga-ewe oge dị oke mkpa. N'ụzọ dị mma, arụmọrụ nke ngwa ahụ nwere ike ịmepụta ihe ndị dị otú ahụ, n'ihi ọrụ arụmọrụ na-arụ.
Dịka ọmụmaatụ, anyị na-agbakọ uru nke ụlọ ọrụ ahụ na mpaghara dịgasị iche iche, na-ama ọnụọgụ ego na ego nke mmepụta. Iji mee nke a, ọ dị gị mkpa iji ego akwụ ụgwọ.
Họrọ topmost cell maka ngụkọta ego. Anyị na-etinye ihe ịrịba ama "=". Pịa na cell nwere ọnụọgụ ego na otu akara. Anyị na-etinye ihe ịrịba ama "-". Họrọ cell na ego.
Iji gosipụta nrite uru maka akara a na ihuenyo, pịa bọtịnụ ahụ Tinye.
Ugbu a, anyị kwesịrị idetuo usoro a na mpaghara dị ala iji mee nhazi dị mkpa n'ebe ahụ. Iji mee nke a, tinye cursor na ala dị n'akụkụ aka nri nke cell nke nwere usoro. Ejiri afọ juru. Pịa bọtịnụ na-ekpe aka ekpe na n'ime obodo mgbochi, dọkpụrụ cursor ruo na nsọtụ tebụl.
Dika ị pụrụ ịhụ, mgbe omume ndị a gasịrị, e depụtaghachiri usoro ahụ n'ogologo dị n'okpuru. N'otu oge ahụ, n'ihi ihe nnweta nke adreesị adreesị, nbipụta a mere na mgbada, nke mere ka o kwe omume ịgbakọ nrugharị ahụ n'ụzọ ziri ezi na mkpụrụ ndụ ndị dị n'akụkụ.
Nzọụkwụ 5: Ntughari nchịkọta nke otu data cell site na nso
Ma, mgbe ụfọdụ, ọ dị mkpa iji mee ihe dị iche, ya bụ, na adreesị anaghị agbanwe mgbe ị na-edegharị, ma na-anọgide na-adịgide adịgide, na-ezo aka n'otu cell. Esi mee ya?
Anyị na-aghọ sel mbụ iji gosi nsonaazụ nke nghazi. Anyị na-etinye ihe ịrịba ama hà. Pịa na cell nke a na-edezi. Tọọ ihe ịrịba ama ahụ "obere". Anyị na-etinyere mkpụrụ ndụ nke onye na-adọtaghị, nke adighi-agbanwe adreesị ya.
Ma ugbu a, anyị na-abịa n'ụzọ dị mkpa nke usoro a site na nke gara aga. Ọ bụ ihe na-esonụ nke na-enye gị ohere ịmepụta njikọ site na ikwu na zuru. Tinye ihe ịrịba ama dollar n'ihu nhazi nke ntanetị na ntanetị nke cell nke adreesị ya ekwesịghị ịgbanwe.
Anyị pịa na keyboard Tinyenke na-enye gị ohere igosi nchịkọta maka akara a na ihuenyo ahụ.
Iji mee nyocha na mpaghara ndị ọzọ, n'otu ụzọ ahụ dịka na ihe atụ mbụ, anyị na-akpọ njupụta ejiri ma dọrọ ya.
Dịka ị pụrụ ịhụ, a na-eme usoro ntinye aka kpọmkwem dịka anyị chọrọ. Nke ahụ bụ, mgbe ị na-agagharị, adreesị nke belata data gbanwere, ma onye na-adọtaghị agbanwe agbanweghị.
Ihe atụ dị n'elu bụ naanị ikpe pụrụ iche. N'otu aka ahụ, ịnwere ike ime nke ọzọ, nke mere na onye ahụ na-apụnara ihe na-anọgide na-adịgide adịgide, onye na-adọtara ya bụ onye ikwu na gbanwere.
Dịka ị pụrụ ịhụ, n'ịmepụta usoro ntinye ntinye na Excel ọ dịghị ihe siri ike. A na-eme ya dịka iwu ndị ahụ dị ka nchịkọta edemede ndị ọzọ na ngwa a. Ịmata ụfọdụ nuances na-adọrọ mmasị ga-ekwe ka onye ọrụ jiri usoro omume mgbakọ na mwepụ mee ihe n'ụzọ ziri ezi, nke ga-azọpụta oge ya.